Taageerada xulufada dowlada Sweden oo dhulka gashay | Somaliska
Afti urur cusub oo ay samaysay shirka Skop bishii hore ayaa lagu soo bandhigay sida taageerada ay haystaan xulufada dowlada Sweden ay hoos ugu dhacday. Xisbiyada ku midaysan xulufada dowlada Sweden ee uu hogaamiyo Moderaterna (M) ayáa guud ahaan helay 37% halka xulufada mucaaradka ee uu hogaamiyo xisbiga Socialdemokraterna (S) ay heleen 52%.
Xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) ayaa helay 7,3%. Aftidaan ayaa muujinaysa sida dadka Swedishka ah ay u codeyn lahaayeen haddii maanta doorashada la qaban lahaa, iyadoo ay doorashada ka dhimantahay 5 bilood oo keliya. Qaasatan xisbiga Kristdemokraterna (KD) ayaa la filayaa in aysan sanadkaan baarlamaanka soo galin maadaama ay heleen 2,7% oo keliya iyadoo ay waajibtahay in xisbigu uu helo 4% si uu baarlamaanka kuraas uga helo.
Wow xisbiyadaan wadanka hada mammaledig waa wixii wax haysata wax ugu sii darayaal marka bulshada uma roona danyarta ah xisgida Socialka Ayaa u roon dhulka gala oo ha soo noqonina dheh. Dhana kale qoraalka sax xisbiga Sverige D 7.3 ayuu haystaa Ayaa tiri hada 2.7 tee sax sxb walow aan ogeyn Inu heysan jirey ayaantaaan codkiisuna sare u sovdags 7.3 bal dib u EEG qoraalkaaga sxb thanks